Hel caawimaad haddaad weyso shaqadaada | USAHello
Macluumaadka koronafayras > Hel caawimaad haddaad weyso shaqadaadaWaxaa tarjumay Translators without Borders
Shaqadaada miyaad weyday? Ma awoodid miyaa inaad shaqeyso? Soo ogow haddii aad heli karto caawimaad dawladeed iyo waxa la sameeyo haddii aadan u qalmin.
Maxaa dhacaya haddii shaqadayda aan waayo?
Ganacsiyaal badan ayaa laga xiray wadanka oo dhan Caronofeyras dartiis. Dadbadan ayaa shaqooyinkoodii waayey. Dadka kale ma shaqeeyaan sababtoo ah way xanunsanyihiin yihiin ama qof ay yaqaanaan ayaa xanuunsan. Waxaa jira qaabab aad ku heli karto caawimaad iyo lacag haddii aadan shaqeynin sababta oo ah ‘coronafeyras dartiis.
Waa maxay caymiska shaqo la aanta?
Gobol kasta wuxuu leeyahay barnaamij caymis shaqo la’aan ah oo dadka siiyo lacag haddii ay shaqadoodda waayeen. Cadadka lacagta iyo tirada toddobaadyada caawimadu waa ku kala duwan yihiin gobol kasta. Raadi xafiiska caymiska shaqo la’aanta ee gobolkaada. Gobollada badankood, waxaad caawimaad ka heli kartaa 26 toddobaad.
Waxaa jira laba nooc oo caawinaad ah oo cusub sababta oo ah xaaladda degdegga e e coronafeyraska:
Dadka shaqo la’aanta ah waxay heli karaan 13 toddobaad oo dheeraad ah gobol kasta, sidaa darteed dadka badankood waxay caawimaad u heli karaan 39 toddobaad.
Qof kasto oo qaato macaashka shaqo la’aanta laga bilaabo 27-ka Maarso illaa Julaay 31 wuxuu helidoonaa $ 600 dheeraad ah toddobaad kasta.
Baro waxbadan oo kusaabsan ceymiska shaqo la’aanta inta uu socdo COVD-19 dillaacay.
Yaa heli kara caymiska shaqo la aanta?
Si aad ugu qalanto caymiska shaqo la’aanta, waa inaad Mareykanka(USA) ka heshaa oggolaansho shaqo. TanI waxaa ka mid ah muwaadiniinta Mareykanka, qaxootiga, asley, kuwa kaarka cagaaran wato iyo qof kasta oo kale oo haysto ogolaasho shaqo.
Waa inaad shaqeynaysay, oggolaansho haysatay, oo aad shaqadaada ku lumisay iyadoo aan khaladkaaga adigu kaligaa ahayn. Waa inaad sidoo kale awoodaa oo aad rajaynaysaa inaad hada shaqeyso hadii aad shaqo cusub hesho.
Haddii ogolaashahaada shaqaalayntu ay leedahay taariikh dhicitaan, ma heli doontid caawinaada shaqo la’aanta taariikhdaas kadib.
Si aad ugu qalantid, waxaa laga yaabaa inaad shaqadaada joogtid dhowr toddobaad kahor inta aadan shaqadaada waynin. Waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan gobolkaaga oo leh tilmaantan Hagaha dawlad-goboleed.
Maxaa dhacaya haddii aanan u qalmi waayo?
Laga yaabo inaad Mareykanka ku cusub tahay, ama laga yaabo inaad shaqeyso waqti-dhiman/ hal galin ama qandaraasle madax-bannaan – tusaale ahaan darawalnimada Lyft ama Uba. Waxaad ka heli kartaa caawimaad Caawinta Shaqala’aanta faafo.
Sideen u codsadaa caymiska shaqo la\_’aanta ama gargaarka shaqo la\_’aanta faafo?
Meesha ugu wanaagsan ee laga bilaabi karo waa xafiiska shaqo la’aanta gobolkaada. Xafiisku wuu kuu sheegi karaa haddii aad u-qalanto iyo haddii kale iyo intaad heli doontid. Marka lagugu meeleeyo, waxaad si toos ah u heli doontaa $ 600 dheeraad ah todobaadkii.
Kawaran hadaan laydiwaangalin?
Haddii aan laguu ogolaanin inaad ka shaqeyso Mareykanka, ma codsan kartid caymiska shaqo la’aanta ama kaalmooyinka lacageed ee kale ee dowladda. Wali waad helikartaa daaweyn caafimaad iyo baaritaanka COVID-19.
Halkan waxaa ah qaar ka mid ah barnaamijyada xaaladaha degdegga ah ee lagu caawinayo dadka aan sharciga lahayn:
Ka Betancourt Macias aas-aaska caawitaanka waxbarasha waxay leedahay lacag deg deg ah. Waad ka codsankartaa websaydhkooda lama ka wac (360) 524-3664 si aad ula hadashid qof Ingiriis ama Isbaanish.
The Ururka Shaqaalaha Guryaha Qaranka (NDWA) wuxuu leeyahay lacag loogu talagalay xubnaha ururkiisa si ay u bixiyaan gargaar degdeg ah shaqaalaha daryeelka guriga, daryeelayaasha.
The Sanduuqa Shaqada ee Muhaajiriinta Shaqaale Soogalootiga wuxuu caawimaad toos ah siiyaa shaqaalaha muhaajiriinta ah.
The Mid ka mid ah Sanduuqa Gurmadka degdegga ah ee FairWage wuxuu siin doonaa caawimaad lacageed shaqaalaha maqaayadaha.
Maxaa kale oo ay dawladdu samaynaysaa si ay u caawiso?
Dawladdu waxay siin doontaa dadka qaar ee Mareykanka lacag hal mar ah si ay uga caawiso waqtigan adag. Bixinta lacagta waa $ 1200 qofkiiba, $ 2400 labadii qof ee isqaba iyo $ 500 oo dheeraad ah cunug kasta. Si aad ugu qalanto inaad hesho lacagtaan:
Qof kasta oo reerkaaga ka tirsan waa inuu lahaadaa lambarka amniga bulshada.
Waa inaad tahay muwaadin Mareykan ah ama haysataa kaarka cagaaran ama haddii kale aad ka soo baxdid shuruudaha deganaanshaha IRS.
Uma baahnid inaad wax sameyso si aad u hesho jeeggan illaa iyo inta aad xareysay canshuuraha 2018 ama 2019 canshuurta aad leedahay macaashka Lambarka Bulshada ee firfircoon. Haddii aadan weli xareyn canshuurtaada 2019, waad xereyn kartaa hadda.
Haddii aad ku soo celiso canshuur celinta ama lacag bixinta damaanada bulshada si toos ah akoonkaaga bangiga, waxaad heli kartaa lacagtaada bisha Abriil.
Haddii dawladdu aysan haynin macluumaadka akoonkaada, waxaa lagu siin doonaa jeeg.
Haddii aadan sida badan qaadanin in kuugu filan si aad u xareyso canshuur celin, weli waxaad heli kartaa lacagta mishaarka. Waxaad u baahan doontaa inad galiso macluumaadkaada foomka mishaarka ee kala sooc-laa,aanta. Waxaa lagu weydin doonaa lambarada amniga bulshada, ciwaanka boostada, iyo macluumaad kale.
Kawaran haddii aan waayo shaqo xanuun aniga ihayo ama qooskeyga hayo dartiis?
Haddii aad xanuunsantahay oo ad u maleeysid inuu noqoni karo COVID-19, waa inaadan aadin shaqo. Wac qofkaad u shaqeysid uguna sheeg iyaga taleefoon si aadan u saamaynin dadka kale. Baro sida loo helo caawimaad haddii aad xanunsantahay.
Shirkado badan ayaa bixiya waqti fasaxeed mishaar leh haddii aad la xanunsantahay COVID-19 ama haddii aad weyneesid shaqo si aad u daryeeshid xubin ka tirsan qooyska kasoo qaba feyraska.
Qodob sharciyeedka CARES, inta badan shirkadaha leh wax kasii yar 500 oo shaqaalo ah waxay bixin doonaan labo isbuuc oo mishaarka jirada. waxaa jirto caawimaad dheeraad ah oo ay leeyahiin dadka aan shaqeeyn karin xanaaneynta caruurtooda awgeed. Weydii shirkadaada haddii ay leeyahiin fasaxa-jirada mishaarka leh ee coronavirus si aad u ogaatid waxaad filaneysid.
Ogow xaquuqdaada kusaabsan fasaxa jirada ee mishaarka leh inta lagu jiro xaaladda degdegga ah ee coronafeyraska.
Sidee ayaan caawimaad ugu heli karaa ganacsigeeyga yar?
Ganacsiyada iyo kuwa aan faa,ido doonka ahayn ee leh wax kasii yar 500 oo shaqaalo ah ee USA dhaxdeeda waxay codsan karo mashruuca loogu yeero Mashruuca badbaadinta Mushahaarka (PPP) ee Qodob sharciyeedka CARES si ay caawimad ugu helaan ganacsigooda.
Haddii aad tahay qandaraasle madaxbanaan ama ganacsigaada adiga kugu kooban yahay, weli wad codsan kartaa.
Mashruucan, bangi ayaa kusiinini amaah/dayn tasoo u dhiganto 2.5 jeer iskucelcelis mishaarkaaga bisha oo aadan dib u gudeynin inta aad lacagta amaahda ah u isticmaaleysid kharashaadka mushaarka, bixinta kirada, iyo adeega korontada. Barnaamijkan waxaa loogu tala galay in uu dadka ku haayo shaqada, marka haddii aad dhinto/yareyso caddadka shaqaalahada xiligas, waa inaad dib ka bixisaa wax badan.
Si aad u codsato barnaamijkan waa inaad wacdaa bangigaada hadda si aad u ogaato haddii ay yihiin deen bixiyayaal barnaamijkan. haddii aanay amaah ku siinin barnaamijkan, waxaad awooddaa inad hesho deen-bxiye.
Isu tanga ganacsiyada yar-yar waxay u hayaan macluumaad badan oo kusaabsan mashruucan iyo caawimaad kale ee ganacsigaada. La Cocina waxay sido kale haysaa liis wanaagsan oo ganacsiyada yar-yar ah gudaha Califrinia iyo guud ahaan USA.
Maka heli karaa caawimaad magaaladayda ama gobolka?
Qaar kamid ah gobolada iyo magaalooyinka ayaa caawinaya shaqaalaha aan diwaan gashaneen iyo dadka aan muuwaaddiniinta ahayn kuwaasoon u qalmin faa,idooyinka federaalka.
Ka ogow macluumaadka maamul goboleedyada wargelinta muhaajiriinta.
California’s Disaster Relief Assistance sanduuqa waxuu caawinayaa dadka reer Califrina ee aan diwaan gashaneen kuwaasoon heli karin faa, idooyinka caymiska shaqo la, aanta iyo gargaarka masiibooyinka. Guddoomiyaha California ayaa sheegay ku dhowaad 150,000 qaangaaro reer California aan sharciyeesneen in ay heli donaan hal-mar oo faa, ido lacageed ah oo ah $ 500 qaargaarkiiba (oo wadato qarash dhan $ 1,000 qooyskiiba). Laga bilaabo bisha 5aad (meey)2020, lacagta waxaa bixin doonaa hay, adaha maxaliga ah ee caawinayaan muhaajiriinta reer California. La xiriir hay, adda bulshadaada si aad u ogaato sida loo codsado.
Magaalada Chicago waxay leedahay in ay xaqiijin doonto in masruucyadeeda ay heli karaan qofwalbo oo joogo gudaha Chicago, wax kasta oo ay tahay waddankooda dhalasho ama xaaladdooda wadanimo. Ogow macluumaad kusaabsan dhamaan kheyraadka Chicago inta lagu gudo jiro xaaladda degdega ah e and coronafeyraska.
Magaalada Boston waxay leedahay waxaan u haynaa adeegyo dadka degan Boston ee uu saameeyay COVID-19, ayadoo aan loo eegeynin xaaladdooda soo galooti. Ogow sida loo helo adeegyada muhaajiriinta gudaha Boston.
Magaalada Seattle waxay leedahay in qof walbo uu qalmo adeegyadooda, ayadoo aan loo eegeynin xaaladdoda soo galooti. Ogow barnaamijyada iyo adeegyada COVID-19 ee gudaha magaalda Seatle.
Noocyada kale ee caawinta
Ma u baahantahay caawimaad cunto adiga iyo qooyskaaga?
Eeg si aad u aragto inad aad u qalanto barnaamijyada cunada sida WIC iyo SNAP.
Cuntada bagiyada iyo cuntada miisaska waa hay, ado maxali ah kuwasoo dadka siiya raashiin. Ogow bangiga cuntada deegaankaada.
Iskuulo iyo Xaruumo badan oo daryeelka caruurta iyo dadka qaangaarka ah ayaa bulshooyinkooda u fidiya adeeg cunto lacag la,aan ah. Waxaad sidoo kale aqrin kartaa waxa kusaabsan dagdaga barnaamijka cuntada caruurta. The xiriir iskuulkaaga deegaankaada ama bangiga cuntada deegaankaaga si aad u barato sida looga helo cawimaad barnaamijkaaga deegaankaada.
Qaar kamid ah magaalooyinka iyo gobolada ayaa bixiyay kiro-dhaaf (xili aadan ku qasbaneeyn inad bixiso kirada). Tani waxay micnaheedu tahay inan lagaa saari karin (in aan lagaa bixin karin gurigaaga) haddii aadan hadda bixin karin. Waa inaad dib ka bixisaa kirada. Ogow haddii magaaladaada ama gobolkaaga leeyahay Kiro-dhaaf. Waxa kale oo aad ka hubin kartaa websaydhka dowladdaada hoose. wixii macluumaad ah.
Inta badan lacagaha amaahda ah ee ardeyda federalka (aan ahayn qaas ama amaahda perkins) waa la daahin karaa ilaa 30ka, Bisha 9aad, 2020, ganaax ama dulsaar la, aan. Ogow aqbaar dheeraad ah oo ku saabsan gargaarka deynta ardayda.
Haddii aan helo deeqda gargaarka degdega ah, mawaxaan noqon doonaa dacwad dadweyne?
Ma laguugu ganaaxi doono sharciga dacwad dadweyne oo ah isticmaalka adeegyada caymiska shaqo la, aanta, amaahyada ama daryeelka caafimaadka ee xiriira COVID-19.
Sharciga ujrada dadweynaha wuxuu leeyahay haddii dadka codsanaya bedelka sharciga, kaarka cagaaran, ama kordhinta fiisada ay ka helaan faa iidooyinka bulshada gobolkooda, looma ogolaanayo inay si rasmi ah u degaan. Faa, idooyinka kale, sida qadada iskuulka iyo caymiska caafimaadka caruurta, ha tirin. Aqri wax badan oo ku saabsan sharciga dacwada dadweynaha.
Waxaad heli kartaa macluumad badan oo wanaagsan oo kusaabsan sida loo helo caawin haddii aad shaqadaada lumiso:
Gobol ka gobol macluumaad oo ka socda soogalootin la wargeliyey
Macluumaadka ku saabsan barnaamijyada dadweynaha Ka ilaalinta Qoysaska Soogalootiga
Hay’adda la dhaho Legal Aid at Work waxay haysaa macluumaad ku saabsan xaquuqaadka shaqada ee shaqaalaha aan sharciyeesneen kasoo ku qoran Ingiriis, Isbaanish iyo Jeyniis. Qaar kamid ah macluumaadka waa dalka oo dhan, qaarna waa California oo kali ah.
Ogow xuquuqda aad leedahay inta lagu jiro coronavirus-ka faafa
Macluumaadkan waxay ka imaanaya ilo lagu kalsoon yatay, sida dowladda Mareykanka Waaxda shaqada iyo adeegga dhaqliga gudar iyo adeegga dhaqliga gudaha. USAHello ma bixiso talo sharciyeed ama mid caafimaad, mana jiro wax aqabkeena ah oo loogu tala galay in loo qaato talo sharciyeed ama caafimaad ahaan.
Miyaad qabtaa su’aalo dheeraad ah oo ku saabsan sida caawimaad loo helo haddii aad weydo shaqadaada? waad awoodi kartaa [email protected].